Home Wararka Qorshe bannaanbaxyo ka dhaca Muqdisho oo bilowday, haddii Villa Somalia ay...
[XOG] Qorshe bannaanbaxyo ka dhaca Muqdisho oo bilowday, haddii Villa Somalia ay dib u dhigto Doorashooyinka
Waxaa magaalada Muqdisho ka bilaabmay shirar looga tashanayo sidii wax laga yeeli lahaa haddii aay Villa Somalia dib u dhigto Doorashooyinka Dalka oo lagu ballamay in la soo gabagabeeyo 10ka Bisha Oktober ee foodda nagu soo haysa.
Sida MOL aay ogaatay waxaa socda qabanqaabo haddii uu dib u dhac ku yimaado Doorashooyinka in magaalada Muqdisho aay ka dhacaan dibad baxyo looga soo horjeedo dib u dhaca, waxaana dibad baxayaasha amnigooda sugi doona ciidamo ka tirsan Millatariga Soomaaliya.
Villa Somalia ayaa durba bilowday in aay carqalad ka dhex abuurto dhowr magaalo oo lagu wado in aay Doorashooyinka ka dhacaan, waxaana Guddoomiyaha Gobolka Gedo oo maanta wareysi siiyay idaacadda BBC uu sheegay in aanay aqoonsaneyn Madaxweynaha Jubbalanda Axmed Madoobe isagoo sheegay in muddo xileedkiisa aay ku egtahay bisha foodda nagu soo haysa ee Ogoosto.
Axmed Madoobe ayaa shaciyan waxaa muddo xileedkiisa uu ku egyahay bisha Ogoosto ee sanadka 2023, balse waxaa Villa Somalia aay sheegtay doorashadiisa kaddib in aay siisay laba (2) sano oo ku meel gaar ah taasoo ku eg Ogoosto 2021.
Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa walaac ka muujiyay in dalka uu ku jiro halis siyaasadeed taasoo horseedi karta in aay dib u bilowdaan dagaallo u dhexeeya Dowladda uu muddo xileedkeeda dhammaaday iyo shacabka.
Qaar ayaa aaminsan in si toos ah loo aado Villa Somalia, waxayna ku sababeeyeen inta uu Villa Somalia dhex fadhiyo Farmaamo in dalka aanay ka dhaceyn Doorasho lana heli doonin siyaasad deggan.
Farmaajo ayaa qorsheynaya in uu si dadban uga dhabeeyo muddo kororsigiisii dhicisoobay taasoo siineysa fursad kale haddii uu daahiyo Doorashooyinka,